Ukusika ibhodi - ukhuni
Ukuba ikhishi kwindawo yokuhlala ihlala isetyenziselwa injongo yayo, ngoko ke ayikwazi ukwenza ngaphandle kweebhodi zokusika. Ewe, iibhodi, emva koko, ngokwemigaqo yococeko kwiikiti eqhelekileyo yokusika intlanzi, inyama, inkukhu , imifuno nesonka, kufuneka kusetyenziswe indawo ehlukeneyo yokusebenza. Ukuthelekisa, kwiindawo zokutya ezikarhulumente kufuneka kubekho ubuncinci beebhodi zokusika ezenziwe ngamatye.
Ziziphi iibhodi zokusika ezinjani?
Ekuqwalakeni kokuqala kunokubonakala ngathi zonke iibhodi zokhuni zifana ngokufanayo kunye ncinane kuxhomekeke kwimithi yesityalo. Kodwa oku kuqale ukujonga. Enyanisweni, luhlobo lwenkuni apho ibhodi yokusika eyenziwa ecacisa ukuba liza kuhlala libukeka njani kunye nokusebenza kwayo. Ngaloo ndlela, abapheki bezakhono bakhetha ukusebenzisa iiplanga ezenziwe nge-bamboo, i-oki, i-acacia okanye i-hevea, yonke into ephezulu yokumelana nomphunga womswakama kunye nomonakalo owenzayo. Kodwa kukufanelekile ukuzonwabisa, ngokunjalo, akubizi. Eminye eyongeziweyo yokonga iya kuba yithengi yeesethi zeebhodi zokusika ezenziwe ngepine, i-beech okanye i-ash ash.
Ungakhetha njani ibhodi yokusika kwizinto?
Kwinqanaba elinqabileyo likholisa iliso nezandla ngaphezu kweenyanga, ukhethe oku ngeziphakamiso ezilandelayo:
Into yokuqala kufuneka uyibeke ingqalelo xa ukhetha ibhodi yekhitshi yile ndawo . Ngokomfanekiso wemithi, unokwazi ukuba ingaba yinto ethile yokhuni okanye ifakwe kwimivalo emininzi. Okungenakusoleka ukuthetha, ukhetho lokuqala lukhethwa ukuthengwa, njengoko kungenakwenzeka ukuba luqhekeke phantsi komthwalo onzima (ukusika inyama okanye ukupheka). Kukholelwa ukuba iibhodi ezinamathele zingasebenzi phantsi xa hlamba, kodwa uya kuvuma, le nto incinci inxulunyaniswa ne-ingress ye-glue into yokutya.
Ipharamitha yesibini ubukhulu bhodi yokusika . Kukho umgaqo-ogqithiseleyo, ongcono. Ewe, ukusebenzisa i-log yonke yokusika ukutya akunakwenzeka ukuba uqikelele. Kodwa phakathi kwamabhodi amabini ahlukeneyo, ukhetho lunikezelwa kumntu ogqithileyo. Ukukhonza okude kuninzi kuninzi ngamabhodi okusika amaplanga, ububanzi obuyi 3-4 cm.
Ubukhulu bebhodi lokusika kufuneka ludibene ngokufanelekileyo nenjongo yalo. Ukuba isitya esincinci singasetyenziselwa isonka, ngoko inyama inyama yayo ifanele ibe ubuncinane be-20x40 cm.
I-oven kunye nomsebenzi we-microwave
Ukuhamba kombane-ngamanzi atshisayo
Ifowuni engenaCordless Phone
Indlela yokukhetha ibhendi yokuhlambela?
Indlela yokudibanisa iliso lesibini kwikompyutha?
I zixhobo ze Scrapbooking
Unokukhetha njani ipaka yokucima isitofu segesi?
I-alamu yoKhuseleko kwindlu
Yima kwiyunithi yenkqubo
UChrissie Taygen noJohn Legend batshaya i-lens okokuqala emva kokuvakalisa umzekelo wesibini wokukhulelwa
Iingxelo ezingalindelekanga malunga nefilimu ephathekayo "I-Snow White kunye neNtsuku ezisixhenxe" ngokuhlonipha ukuzalwa kwakhe kwama-80!
Indlela yokwenza ukugqwesa kwiingcambu?
UMnumzane uCharlene, kunye nabantwana bakhe, batyelela umthendeleko ngexesha likaSt. John's Day
I-Feijoa ngexesha lokukhulelwa - iipropati ezixhamlayo kunye neengqinisiso kumajikijolo angaphandle
Iklabishi ye-Broccoli - njani ukupheka?
Ubonakala njani umsebenzi?
Umthi weKrisimesi weebhanbhoni zeKansasi
ESwitzerland ngeyona mini
Indlela yokwenza umgquba waseFransi?
Isonka sonke seengqolowa
Amakhadi aseGlen Doman
Ukutya okusemgangathweni kokulahleka kwesisindo
Iiglasi ezijikelezayo zelanga
Yintoni enxiba ngayo i-skirt emangalisayo emadolweni?